के चीन अर्को जापान र दक्षिण कोरिया बन्ला ?
As of Thu, 16 Jul, 2020 07:30
सबै उच्च वृद्धिका अर्थतन्त्रहरूले उच्च वृद्धिको चरणको अनुभव गरेका छन् र पछि मध्यम र न्यून वृद्धिमा ओर्लिएका छन् । केही मुलुक तथा क्षेत्र तीव्र वृद्धिबाट न्यून वृद्धिमा ओर्लिएका छन् भने केहीले राम्रो गतिको वृद्धि हासिल गरेका छन् ।
जापानले उच्च वृद्धिबाट ओर्लिएको महसुस गरेको छ । यो मुलुकको जीडीपी ओरालो लाग्ने अवस्थालाई अचानक मानिएको छ । यो मामिलामा जापानको तुलनामा दक्षिण कोरिया राम्रो उदाहरण हो । यो मुलुकको आर्थिक वृद्धि १९९० को दशकदेखि क्रमिक रूपमा मात्रै ओरालो लागेको थियो ।
त्यसैले मानिसहरूले सोच्ने गरेका छन् कि चीन पनि अर्को जापान वा दक्षिण कोरिया होला ? चीनको आर्थिक विकासको अर्को चरण राम्रो होला वा कठिन ?
विश्वका अर्थतन्त्रहरूले प्रायःजसो क्याच–अप मोडल अर्थात् निर्यातले डो-याएको अर्थतन्त्रबाट उच्च वृद्धिको अवस्थाको महसुस गर्ने गरेका छन् । पूर्वी एसियाका सबै अर्थतन्त्रले यसै मोडललाई आत्मसात् गरेका छन् । विगत ४० वर्षको अवधिमा चीनले आफ्नो विशाल बजारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको थिएन । यसले सुधार र खुलापनको बाटो पक्डेको थियो । यो पूर्वी एसियाली राष्ट्रसँग आधारभूत रूपमा फरक छैन ।
अर्को चरण भनेको विकास नीतिहरूले विशाल बजारबाट फाइदा लिने विषयलाई जोड दिनुपर्छ ।
अर्को चरणको प्रमुख विशेषता भनेको सम्भावित वृद्धि दर सुस्त हुन सक्छ । परम्परागत लगानीको प्रतिफलमा पनि व्यापक मात्रामा गिरावट आएको छ ।
जब अर्थतन्त्रमा बहिष्कारको धक्का लाग्नेछ, यसमा मागको अवस्था कायमै राख्नका लागि ल्याइने खुकुलो मौद्रिक नीति पनि कम प्रभावकारी हुन सक्छ । जुन, हाल चीनको मामिलामा भइरहेको छ । यो चिनियाँ अर्थतन्त्रले अर्को चरणका लागि बनाएको संक्रमणकालीन अवस्थाको घचघच्याइ हो ।
चीन हाल क्याच–अप मोडलको अन्त्यमा रहेको छ । यहाँ केही सूचकलाई प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । पहिलो, चिनियाँ उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय हिस्सा असाधारण रूपमा उच्च छ । दोस्रो, वास्तविक ज्याला पनि लगातार बढिरहेको छ । तेस्रो, पुँजीको प्रतिफलको दर ओरालो लाग्ने क्रममा रहेको छ । अन्त्यमा उत्पादकत्व पनि ओरालो लाग्ने क्रममा देखिएको छ ।
चीन हाल अन्तिम चरणको अन्त्यमा रहेको छ । त्यसैले यो मुलुक कसरी अर्को चरणमा जाला ? यो संक्रमणको अवधिमा जोखिम हुन सक्छ र बृहत् आर्थिक तहमा ठूलो उतारचढाव आउन सक्छ ।
जब अमेरिकाले १९८० को दशकमा जापानका लागि समस्या सिर्जना गर्न सुरु ग-यो, यो व्यापारयुद्धका रूपमा सुरु भयो । जापानले आफ्नो अर्थतन्त्र अर्को चरणमा प्रवेशको संक्रमणको अवस्थामा रहेको महसुस गरेन । उनीहरूले पुरानै विधिबाट आफ्नो अर्थतन्त्र मिलान गर्ने प्रयास गरे । चीनले पनि अतिरिक्त समस्याको सामना गर्न सक्छ ।
पहिलो त बजारको आकारको दृष्टिकोणबाट चीनलाई लाभ छ । नयाँ चरणको सुरु गर्दा चिनियाँ बजारको आकारलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
दोस्रो चीनले वास्तवमै आपैंmसँगको व्यापारमा ध्यान दिनुपर्छ । उसको भावी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय एकता महत्वपूर्ण हुनेछ ।
तेस्रो, सेवा र गैरव्यापारको क्षेत्रहरूले उनीहरूको लाभलाई बढाउनुपर्नेछ । कतिपय साना अर्थतन्त्रले आफ्नो सेवा र गैरव्यापारिक क्षेत्रलाई खुला नगर्न सक्छन् । कम उत्पादकत्वका कारण उनीहरूले यसो गर्न सक्छन् ।
चिनियाँ बजार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि पर्याप्त छ । खुला अर्थतन्त्रले उत्पादकत्व कम गराउनेछैन ।
चौथो, चीनले आफ्ना पूर्ण सप्लाई चेन र सिटी कङलोमरेट्सलाई पूर्ण बनाउनु आवश्यक छ । हालका चिनियाँ नीतिले पुरानो मोडललाई नै पछ्याइरहेका छन् । यो आगामी दिनमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।
कृषिमा युवा सहभागिता
बेरोजगारी समस्या र समाधानको बाटो
मौद्रिक नीतिमा कृषिक्षेत्रको अपेक्षा